Izilondolozi zikaGary Williams - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
I-EPA ikhothama embonini yamakhemikhali ekubambezelekeni kokubuyekezwa komdlavuza weGlyphosate
Posted on October 20, 2016 by UStacy Malkan
Lokhu kungenzeka kube yisonto elinzima kuMonsanto Co I-Environmental Protection Agency yayihlelelwe ukuthi ibambe izinsuku ezine zemihlangano yomphakathi egxile embuzweni owodwa: Ingabe i-glyphosate, i-herbicide esetshenziswa kakhulu emhlabeni kanye ne-lynchpin kumcebo kaMonsanto, iphephe njengeMonsanto uchithe iminyaka engama-40 esitshela ukuthi kunjalo?
Kepha ngokumangazayo, imihlangano ye-EPA Scientific Advisory Panel (SAP), ebizelwe ukubheka ubudlelwane obukhona be-glyphosate nomdlavuza, “zahlehliswa“Ezinsukwini ezine nje ngaphambi kokuthi ziqale ngo-Okthoba 18, ngemuva kokunxenxa okukhulu imboni yezolimo. Imboni iqale yalwela ukuthi imihlangano ingabanjwa nhlobo, futhi waphikisana ukuthi uma babanjwa, ochwepheshe abaningana abahola phambili bamazwe kufanele bakhishwe ekubambeni iqhaza, kufaka phakathi "noma yimuphi umuntu oveze obala umbono wakhe mayelana ne-carcinogenicity ye-glyphosate."
Njengoba imihlangano yayisondela, CropLife Melika, emele izintshisekelo zeMonsanto namanye amabhizinisi ezolimo, ngokukhethekile kwaba nodaba ososayensi okungenani ababili abakhethwe iphaneli, besola ukuthi ochwepheshe bangahle babe nokuchema okuhle nezintshisekelo zemboni. Ngo-Okthoba 12, iqembu wathumela incwadi ku-EPA efuna UDkt. Kenneth Portier we-American Cancer Society ukuze ihlolisiswe ngokujulile nganoma yiziphi "iziphetho ezenziwe ngaphambilini" mayelana ne-glyphosate.
Okuphawuleka kakhulu, uCropLife ubize udokotela wezifo ezihamba phambili UDkt Peter Infante ukungavunyelwa ngokuphelele ukubamba iqhaza kwephaneli: "I-EPA kufanele ithathe isikhundla sikaDkt. Infante kube ngudokotela wezifo ezingenalo ubandlululo olunjalo," kusho uCropLife etshela i-EPA. Iqembu lemboni yamakhemikhali lithe i-Infante ayinakwenzeka ukuthi inikeze izifundo zocwaningo ezixhaswe imboni ukwethembeka imboni ekholelwa ukuthi ibafanele. AbakwaCropLife bathi abakwa-Infante bafakaze phambilini ngabamangali emacaleni okuvezwa ngamakhemikhali abhekene neMonsanto. AbakwaCroplife baphinde bathi ngenxa yokuthi u-Infante waye "ukuphela kwesazi sezifo ku-glyphosate SAP" wayezoba nethonya elikhulu ekuhlolweni kwedatha yezifo mayelana ne-glyphosate nomdlavuza.
Incwadi yeCropLife ibhalwe ngoLwesithathu olwedlule, kwathi ngoLwesihlanu i-EPA yamemezela ukuthi ifuna olunye ulwazi lobuchwepheshe bokulwa nezifo ukuze kuqinisekiswe “ukumelwa okuqinile kulowo mkhakha.” I-EPA iphinde yathi omunye wama-panelist uhambe ngokuzithandela, noma ngabe i-ejensi yenqabile ukusho ukuthi ngubani lowo ophaneli.
Indima ye-Infante eyinselele ukunyakaza okunesibindi. Ngemuva kwakho konke, u-Infante uchithe iminyaka engama-24 esebenzela i-Occupational Safety and Health Administration esiza ekutholeni izingozi zomdlavuza kubasebenzi ngesikhathi kwenziwa amanani amakhemikhali anobuthi, afaka i-asbestos, i-arsenic, ne-formaldehyde. I-resume yakhe ifaka phakathi i-National Institute for Occupational Safety and Health lapho enza khona izifundo ze-epidemiological ezihlobene ne-carcinogens, futhi uke wasebenza njengomxhumanisi ongungoti wezifo zezifo ezinhlanganweni zomhlaba eziningi, kubandakanya i-EPA kanye neWorld Trade Organisation.
Ngokusho kwemithombo esondelene nalesi simo, u-Infante usalokhu eyi-panelist kusukela kuleli sonto, kepha asikho isiqiniseko sokuthi imihlangano ingahlehliswa nini, nokuthi ubulungu bephaneli bungabukeka kanjani uma behlelwa kabusha. I-EPA yenqabile ukudingida ukuthi ngubani oqhubeka nokuba sesigungwini nokuthi ngubani ongekho kulesi sikhathi, kanti abanye ababukele bathi i-EPA ngokusobala ibikhothamela intshisekelo yezimboni zezolimo.
“Kuyabheda lokhu. Umkhakha ufuna ukusho ukuthi ososayensi bakahulumeni wethu, abaphambili emkhakheni wabo, abawenele la mapaneli. ”
“Kuyabheda lokhu. Imboni ifuna ukusho ukuthi ososayensi bethu bakahulumeni, abaphezulu emkhakheni wabo, abanele kulezi zinhlaka, ”kusho uMichael Hansen, ongusosayensi ophakeme wabasebenzi kwi-Consumers Union. “Uma ngabe i-EPA ifuna ukwengeza odokotela besifo abengeziwe lokho kuhle kodwa kungani bengakwenzanga phambilini? Lokhu bakwenza ngenxa yengcindezi evela embonini. ”
Imboni ngokusobala isengozini enkulu, njengomphakathi. IGlyphosate iyisithako esiyisihluthulelo semithi yokubulala ukhula enophawu iMonsanto kanye nemithi yokubulala ukhula edayiswa izinkampani eziningi zezolimo emhlabeni jikelele. Futhi kuyisihluthulelo salokho obekuyiminyaka engama-20 yokuthengiswa kwezitshalo ezibekezelela izakhi zofuzo ze-glyphosate ezakhiwe yiMonsanto. Ukuthengiswa kwesikhathi esizayo kwamakhemikhali nezitshalo kusengozini ngenxa yokukhathazeka okwandayo kokuthi i-glyphosate ingadala umdlavuza nezinye izifo noma izifo. Ososayensi emhlabeni jikelele bebelokhu bephakamisa amafulegi abomvu iminyaka eminingi ngokutholakala kocwaningo olukhathazayo, kanti ngonyaka odlule i-International Agency for Research on Cancer (IARC), yathi i-glyphosate kungenzeka i-carcinogen yomuntu. Ngaphezu kwe amacala amathathu zifakwe eMonsanto ngabantu abathi i-Roundup ibanikeze i-non-Hodgkin lymphoma, futhi bobabili abalawuli baseYurophu nabaseMelika bahlola ikhemikhali ukuze lisetshenziswe ngokuqhubekayo.
Kusukela ngezigaba ze-IARC, iMonsanto icele i-EPA ukuthi ibuyisele isiqiniseko embonini ukuthi i-glyphosate iphephile, futhi kuze kube manje, i-EPA ikwenzile ngqo lokho, ikhipha uchungechunge lwemibiko namamemo ahambisana nesimo sikaMonsanto. IMonsanto iphinde yafuna ukuqinisa izimpikiswano zokuphepha kwe-glyphosate ngokukhomba kokusekelayo amaphepha ocwaningo eshicilelwe ngasekupheleni kukaSepthemba kuCritical Reviews in Toxicology. UMonsanto waqasha iqembu elalihlelele iphaneli, futhi iningi lososayensi abayi-16 ababandakanyekayo yilabo ababengabasebenzi baseMonsanto noma abeluleki beMonsanto. Okungenani oyedwa, uGary Williams, uphinde wabonisana neMonsanto ezindabeni zokumangalelwa ezibandakanya i-glyphosate. Ngaphandle kwakho konke lokho kusebenzisana, ucwaningo luthiwa "luzimele."
Kubukeka kungubuzenzisi nje obuncane ukuthi labo sosayensi bavezwa njengabathembekile yimboni, kepha ososayensi abanjengo-Infante noPortier kuthiwa abakufanele ukweluleka i-EPA ngenxa yokwenzelela okusolwayo. Njengo-Infante, uPortier unerekhodi elide njengososayensi ozimele. Uyiphini likamongameli weStatistics & Evaluation Center eAmerican Cancer Society. Ubambe iqhaza kweminye imihlangano engaphezulu kwama-60 yeSAP futhi useke wasebenza kuma-panels ochwepheshe kanye nezeluleko zeNational Institutes of Health, National Institute of Environmental Health Sciences, National Toxicology Program, kanye neWorld Health Organisation Food and Agriculture Organisation.
UPortier naye ubengeke aphawule ngezinto ezikhathaza imboni ngaye, ukuhlehliswa noma ukuguqulwa kwesimo seSAP, ngaphandle kokuthi athi kuze kube namuhla, usahleli ethimbeni.
I-EPA ithe "kuyasebenza ukuhlela kabusha ngokushesha okusemandleni." Kepha ukubambezeleka nokwenza umkhakha ukuthonye ukubamba iqhaza kwamaphaneli akuqinisi ukuzethemba kwabathengi emphumeleni wenhloso.
Lo mbhalo ushicilelwe ekuqaleni ku I-Huffington Post.
Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane CropLife, UDkt. Kenneth Portier, UDkt Peter Infante, EPA, Gary Williams, glyphosate, Monsanto, RoundUp